Pyrolysis: ihe ọ bụ, àgwà, ihe ọ bụ maka na uru | Green Renewables
Usoro nke pyrolysis ma ọ bụ pyrolytic, nke a makwaara, bụ usoro nke mmebi nke biomass na-emepụta site na omume nke okpomọkụ na-enweghị mkpa oxygen, ya bụ, ọ na-ewere ọnọdụ na ikuku akọrọ kpamkpam. Ngwaahịa a kpụrụ n'ihi pyrolysis nwere ike ịbụ ihe siri ike, mmiri mmiri na gas, ma kwekọọ na ngwaahịa ndị dị ka coal ma ọ bụ unyi, tar na n'ikpeazụ ngwaahịa gaseous a ma ama ma ọ bụ uzuoku unyi. Usoro a nwere ike ime naanị na ọdịdị ma ọ bụ ọnụ n'oge combustion ma ọ bụ gasification.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara pyrolysis, njirimara ya na mkpa ya.
2 Ụdị pyrolysis
3 Kedu ihe a na-eji pyrolysis eme ihe na kichin?
4 Uru na oven na mkpa gburugburu ebe obibi
Pyrolysis bụ ọgwụgwọ thermochemical nke ahụ Enwere ike itinye ya na ngwaahịa organic nke sitere na carbon. A na-ekpughe ihe ahụ na okpomọkụ dị elu, na enweghị oxygen, kemịkalụ na nke anụ ahụ kewapụ n'ime ụmụ irighiri ihe dị iche iche.
Pyrolysis bụ ụdị thermolysis na enwere ike ịkọwa dị ka ire ere nke ihe na-enweta na enweghị oxygen ma ọ bụ ụdị reagent. Nreka nke megoro nwere ike pụta site na usoro mmeghachi omume kemịkalụ dị mgbagwoju anya na okpomọkụ na usoro mbufe oke. A pụkwara ịkọwa ya dị ka usoro ndị na-eme tupu gasification na combustion.
Mgbe ọ na-eme n'ụdị ya dị oke egwu. naanị carbon dị ka ihe fọdụrụ, nke a na-akpọ charring. Site pyrolysis anyị nwere ike nweta dị iche iche nke abụọ ngwaahịa ndị bara uru na teknuzu ubi. Ngwaahịa pyrolysis mgbe niile na-emepụta gas siri ike dị ka carbon, mmiri mmiri na gas ndị na-abụghị condensable dị ka H2, CH4, CnHm, CO, CO2 na N. Ebe ọ bụ na a na-amịpụta mmiri mmiri naanị site na pyrolysis gas n'oge oyi ya, mmiri abụọ nke gas. enwere ike ijikọ ọnụ na ụfọdụ ngwa ebe a na-enye syngas ọkụ ozugbo na ụlọ ọkụ ma ọ bụ oxidation chamber.
Enwere ụdị pyrolysis abụọ dị iche iche dabere na ọnọdụ anụ ahụ nke a na-eme ya:
Aqueous pyrolysis: A na-eji okwu a eme ihe mgbe ọ dị mkpa iji zoo aka na pyrolysis nke na-eme n'ihu mmiri, dị ka uzuoku uzuoku mmanụ ma ọ bụ thermal depolymerization nke organic residues na arọ crude mmanụ.
Vacuum pyrolysis: Ụdị pyrolysis nke agụụ a na-agụnye ikpo ọkụ ihe ndị dị ndụ n'ime oghere iji nweta isi ihe na-esi ísì ụtọ ma zere mmeghachi omume kemịkal na-adịghị mma.
Usoro nke pyrolysis si eme na-ekewa ụzọ atọ, dịka ndị a:
Na nke mbụ ogbo e nwere ngwa ngwa ire ere na mmepụta nke obere mmiri, oxides nke carbon, hydrogen na methane. Nbibi a na-apụta n'ihi nkwụsị nke agbụ n'ihi oke okpomọkụ nke usoro na ntọhapụ nke gas ndị tọrọ na kol.
A na-akpọ ọkwa nke abụọ na-arụ ọrụ thermal ire ere ogbo. Okpomọkụ na-ebili n'oge a, mkpụrụ ndụ carbon na-agbaji nke ukwuu, na-akpụ hydrocarbons na tars nwere ike ime. Usoro a na-amalite na 360º C ma kwụsị mgbe ọ ruru okpomọkụ nke ihe dịka 560º C.
Oge ikpeazụ na-apụta na okpomọkụ dị elu karịa 600ºC ma mara ya site na iji nwayọọ nwayọọ na-apụ n'anya nke hydrogen na heteroatoms ndị ọzọ.
Kedu ihe a na-eji pyrolysis eme ihe na kichin?
Mgbe anyị nọ na kichin, anyị kwesịrị inwe ngwá ọrụ ndị dị mkpa iji mee ka ndụ anyị dịkwuo mfe, na ịnweta oven nke ọgbara ọhụrụ dị mma maka nke ahụ. E nwere ugbu a ụdị oven dị iche iche nwere ọrụ nhicha onwe ya, nke a na-akpọ pyrolysis oven, nke isi ọrụ ya bụ iji nwee ike ịsacha onwe ya.
Ụdị oven a Ha nwere ike ibuli okpomọkụ ruo 500 Celsius C, decomposing nke fọdụrụ nri n'ime, ime ka ha ghọọ uzuoku ma ọ bụ ntụ, na-ewepụkwa ndị na-adịghị mma isi mgbe esichara n'ime oven. Ya bụ, nri na-anọgide, n'ihi okpomọkụ dị elu, na-agbanwe ihe ndị dị ndụ n'ime carbon dioxide, nke, mgbe ọ ghọrọ mmiri, na-ekpochapụ; n'otu aka ahụ, ihe inorganic na-aghọ ntụ ma ọ bụrụ na okpomọkụ ahụ dị.
Usoro a nwere ike were site na 1 ruo 4 awa., dabere n'otú mmemme ahụ si dị ọcha, na njedebe, anyị na-ehicha oven na akwa akwa akwa ma na-anakọta ntụ. N'ụzọ dị otú a, a na-ewepụ iji ngwaahịa kemịkal nwere ike imerụ ahụ ike ka oge na-aga.
Uru na oven na mkpa gburugburu ebe obibi
Inwe oven nke na-enye anyị ohere ịchekwa oge na ego, ime pyrolysis na-eweta uru ndị a:
Obi abụọ adịghị ya, uru bụ isi bụ ọrụ nhicha onwe ya.
Ọ bụ gburugburu ebe obibi ka ọ na-ebelata iji ngwaahịa kemịkal na-ehicha oven.
Dị ka ihe mgbako ọkụ eletrik nke National Energy Commission si kwuo, ọnụ ahịa ọkụ eletrik dị ala n'ihi na ọ na-eri naanị 0,39 cents.
A na-eji ihe kachasị mma eme ya iji chebe ya ngwá ụlọ sitere na okpomọkụ dị elu.
Mgbe ọkụ ahụ ruru okpomọkụ nke 500 Celsius, Mkpọchi ọnụ ụzọ oven na oven na-ehicha onwe ya iji gbochie ihe mberede.
Ha dị mma na ịrụ ọrụ nke ọma karịa oven nke ọdịnala.
Enwere ike ịhazi ya ịmalite pyrolysis n'oge ọkụ eletrik dị ala.
Pyrolysis dị mkpa n'ihi na ọ na-enyere aka ịchịkwa mmetọ ikuku metụtara ọkụ.. Ọ na-enyekwara aka belata ọnụ ọgụgụ mkpofu na-abata na ọgbọ nke mkpofu na-adịghị mma, nke na-agbatị ndụ nke ihe mkpofu ma na-eme ka mma nke mkpofu dị mma. N'ikpeazụ, ọ bụkwa ụzọ isi gbanwee akụkụ nke ihe mkpofu ka ọ bụrụ mmanụ a na-echekwa ma na-ebufe.
Banyere pyrolysis nke lignin, bụkwa akụkụ nke osisi, ọ na-emepụta ogige aromatic na ọdịnaya carbon dị elu, ihe dị ka 55% n'ihe banyere cellulose na 20% n'ihe banyere mmanụ osisi; 15% ihe fọdụrụ tar na 10% gas.
Ọ bụrụ na pyrolyzed biomass ọhịa, ihe onwunwe ya nwere mmetụta dị ukwuu na ngwaahịa a na-esi na ya pụta. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ nke mmiri mmiri bụ ibelata mkpụrụ nke usoro ịcha ọkụ n'ihi na a chọrọ okpomọkụ iji wepụ mmiri ahụ yana ịmepụta carbon na-egbuke egbuke karịa mgbe biomass nwere obere mmiri. Ya mere, A na-atụ aro ka mmiri ọdịnaya nke biomass dị nso 10%. Njupụta nke nri nri mbụ na-emetụtakwa ogo carbon nke a ga-emepụta site na pyrolysis, a na-akwadokwa ihe fọdụrụ n'ime ọhịa maka carbon dị elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere pyrolysis na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Pyrolysis